Farxad run ah baan heli karnaa markaan dhawrno amarrada Ilaahay
Nebi Muuse wuxuu yiri haddii aan amarrada Ilaahay addeecno waan barakoobi doonnaa. (Sharciga Kunoqoshadiisa 10:13; 11:27) Ilaahay cabsi kuma addeecno. Sifooyinkiisa wanaagga badan iyo jacaylka aan u qabno baa inagu dhaqaajiyo inaan isaga addeecno oona iska ilaalino waxyaalaha caloolxumeeyo. “Waa kan jacaylka Ilaah, kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno, oo qaynuunnadiisuna ma cusla.”—1 Yooxanaa 5:3.
Bal aan eegno laba hab ay addeecidda Ilaahay inoogu keeni karto barakadiisa.
1. ADDEECIDDA ILAAHAY XIGMAD BAY INOO YEESHAA
“Anigu waxaan ahay Rabbiga Ilaahiinna ah oo idin bara waxa idiin wanaagsan oo idinku hoggaamiya jidkii aad mari lahaydeen.”—ISHACYAAH 48:17.
Yehowah Ilaah wuu ina yaqaannaa oo tilmaanta aan u baahan nahay buu ina siiyaa. Haddii aan rabno inay waxbariddiisa inagu caawiso inaan goʼaammo wanaagsan gaarno, waa inaan Qorniinka Quduuska ah ka baranno wuxuu Ilaahay rabo oo dabadeedna fulino.
2. ADDEECIDDA ILAAHAY WAXAY KEENTAA FARXAD IYO BARAKO
“Waxaa barakaysan kuwa ereyga Ilaah maqla oo xajiya.”—LUUKOS 11:28.
Maanta malaayiin qof oo Erayga Ilaahay xajiyay baa si dhab ah u faraxsan. Bal eeg sheekada nin Isbania deggan oo ahaan jiray nin xanaaq badan oo xaaskiisa iyo dadka kale si xun ula dhaqmi jiray. Maalin ayuu wax ka akhriyay qoraalladii Muuse oo ku saabsanaa dabeecadda qabow ee nebi Yuusuf, ina Yacquub. Yuusuf waxaa la iibiyay isagii oo addoon ah oo si xaqdarro ah ayaa xabsi loogu riday. Haddaba dabeecaddiisa qaboobayd ma beddelin. Wuu nabad iyo naxariis badnaa isagoon cafis qofna u diidin. (Bilowgii, qaybaha 37-45) Ninkii Isbania degganaa wuxuu yiri: “Qisadii Yuusuf waxay igu dhaqaajisay inaan isku dhiso dabeecad qabow oo raxmad iyo iscelis leh. Hadda, noloshayda waxay noqotay mid farxad badan.”
Qorniinka Quduuska ah waxay ina siiyaan tilmaan dheeraad ah oo ku saabsan sidaan dadka ula dhaqmi karno. Maqaalka kan ku xigo baa taas si faahfaahsan uga hadli doono.
Wadaag Wadaag Kuwa Ilaahay Addeeco Way Barakoobi Doonaan
wp20 Lambar 3 bog 11
Kitaabka Quduuska ah Ma Igu Caawin Karaa Inaan Reer Faraxsan Lahaado?